Mpamatsy famaohana lena - Mpanamboatra famafazana lena, mpamokatra entana
Ny zaza azo ovaina biodegradable azo soloina ao an-trano Tsy misy fofona
Fomba voajanahary, tsy misy zava-manitra manampy, mahasalama ho an'ny zaza. Lamba spunlace tsy tenona, malefaka sy sariaka hoditra, hikarakara ny hoditry ny zaza. Ny safo-tànana sy ny vava amin'ny zazakely dia azo antoka sy sariaka, mahatonga ny zaza ho salama sy hadio fitondran-tena kokoa.
Ny solo-drano lena dia misy vitamina E sy C Fampidinana ny tarehy fanesorana tarehy mahomby amin'ny tarehy
Ny famafana voafafa voajanahary voafafa, hydration malefaka, azo ampiasaina amin'ny hoditra mora tohina ihany koa. Ity famafana fanesorana makiazy ity dia afaka manala mora foana ny makiazy rehetra ary manadio ny tarehy iray manontolo.
Factory OEM Wash Car Dashboard Care Auto Barrel Clean Wipe Wet ho an'ny fiara
Antibacterial izay mamelombelona ny vinyl anatiny, ny fingotra ary ny plastika.
Ny atin'ny fiara sy ny mpamily ao anatiny dia miaro ny famaohana olitra izay mamerina amin'ny laoniny ny loko voajanahary sy mamirapiratra amin'ny fiara. Izy ireo dia miaro ny atin'ny fiaranao tsy ho simba, manapotipotika ary miovaova endrika noho ny fitarihana UV, ozon, oxygène ary fisondrotan'ny mari-pana tafahoatra.
Ny vokatra avo lenta an'ny orinasa 80 dia manisa ny famafana bakteria miady amin'ny bakteria
Tohano ny fonosana manokana, fomban-tseranana manokana, raikipohy manokana, famafana famonoana alikaola. Ambongadiny amin'ny vidiny ambany. Lamba tsy misy tenona avo lenta.
Doka 160 namboarina azo soloina isaky ny canister 75% ny famafana toaka
Namboarina mba tsy ho simika mahery, nefa sarotra mikraoba! Arovy amin'ny famafana ny mikraoba sy bakteria mety hiteraka aretina amin'ny tanana mandritra sy aorian'ny ao amin'ny magazay, trano fisakafoanana, birao, efitrano fianarana, gym, lakozia, trano fatoriana, mandritra ny dia maro hafa.
Ny fanadiovana malefaka ny palitao mamafa mamafa amin'ny lamba spunlace tsy misy tenona avo lenta
Ny fanadiovana palitao midina, tsy mila manasa, mamafa ny tasy isan-karazany, ary ny mpiambina ny tanana dia tsy manimba ny akanjo, mora entina, afaka misoroka henatra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra! Tsy manimba ny fitaovana, tsy mamela mari-drano ary mora ampiasaina amin'ny fonosana kely.
Orinasa ambongadiny ambongadiny tsiro fanesorana otrikaretina fikasana manokana bakteria lena
Ny famafana bakteria dia afaka mamono amin'ny fomba mahomby ny bakteria 99,9% ary miaro ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny fiainana. Fanadiovana tanana haingana sy mora. Tsy misy akora simika mahery.
Ekeo ny mpanadio fitaratra fiara namboarina mamafa ny fanadiovan-koditra
Nampiasaina hamafana ny fampisehoana fiara, haingon-trano anatiny, fitaratra fitaratra, efijery momba ny fitaovana an-trano, sns.
Ataovy madiodio mora foana ny fanadiovana kiraro fotsy sy hoditra
Manadio, mamelombelona ary manaova paoma kiraro. Sasaoka lena 40 isaky ny kapoaka. Ny haben'ny solo-drano lena dia 16 * 16cm. Lamba matevina miforitra roa matevina, matevina.